Yusuf Garaad: Maxaa loola jeedaa?
Maxaa loola jeedaa?
Dhowrkii cisho ee na dhaafay Siyaasadda Soomaaliya waxaa hareeyay khilaafka u dhexeeya Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaraha. Iyaga oo taa ka jawaabaya ayay Qarammada Midoobay (QM) iyo Midowga Yurub (MY) waxay soo saareen laba war oo kala gooni ah oo labaduba walaac muujinaya kuna dhiirri gelinaya labada mas’uul in ay xal gaaraan.
Qalinka uma qaadan anigu in aan faallo ka bixiyo khilaafka madaxda Soomaaliya ama meesha ay iska taageen labadan hey’adood oo labaduba dalkeenna muhiim u ah. Laakiin labada war waxaa gunaanadkooda ku qoran, in Soomaaliya diyaar loola yahay in gacan la siiyo. Halkaa laguma istaagin ee waxaa lagu daray dalalka iyo ururrada ay QM iyo MY ay ka kaashanayaan arrintan.
QM waxay qortay “…waxaan si dhow ula shaqaynaynaa Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya, Urur-Goboleedka IGAD, Midowga Yurub, Ethiopia, Boqortooyada Midoobay ee Ingiriiska, Maraykanka iyo kuwo kaloo badan annagoo baadigoob ugu jirta xal arrinta loo helo”
Bal in yar dib u milicso, AMISOM, IGAD iyo Ethiopia.
Miyaaneey Ethiopia ka tirsaneyn AMISOM iyo IGAD? Maxaa gooni loogu xusay. Waxaad is dhihi kartaa UK iyo USA labadaba waa la xusay ee maxaan Ethiopia u soo qaatay? Waa su’aal wanaagsan laakiin UK iyo USA xubno kama aha AMISOM iyo IGAD toona. UK waxaa u gaar ah in ay iyadu kaalmo dhaqaale oo badan ay ku bixiso Soomaaliya.
MY wuxuu qoray hadal ay tarjumadiisu tahay: UN, IGAD, AU, US, Ethiopia iyo dhinacyada caalamiga ah ee ay Soomaaliya leeyihiin iskaashiga.
EU iyadu dalka keliya oo ay magaciisa xustay waa Ethiopia. Kuma filnaan IGAD iyo AU.
Waan ogahay in Ethiopia aan deris nahay, ciidammo ay ka joogaan Soomaaliya, aad ay u daneyso arrimaha amniga iyo kuwa siyaasadda ee Soomaaliya. Laakiin sidoo kale Kenya iyo Djiboouti.
Maxaa Kenya, Ethiopia iyo Uganda ka dhigay IGAD? Ethiopia iyada gooni loogu xusayaa? Mana aha dalka ciidammada ugu badani ay ka joogaan Soomaaliya.
Maxay QM iyo Midowga Yurub ula jeedaan arrinkan?
Yaa yaqaan oo i bari kara?
Posted by Yusuf Garaad at 12:37:00
Reer Xarar Dheerow xoog xilligiisii lama joogo
Khilaafka ka dib
Adeegsiga khaldan ee ereyga mucaarad
Aan ka Qaangaarno Dhaqanxumada Siyaasadeed
Guddoomiyaha ha loo Garaabo
Anigaa kaa Shiish badan - SHEEKO GAABAN
Shirka ATM ee Istanbul
Saxaafadda iyo Xagjirnimada
Fan, Fikir & Faallo
Ruqsad waad u qabtaa dib u daabicid aan wax ka beddel lahayn. Simple theme. Powered by Blogger.